Kupisa Kunopisa Label Vagadziri uye Vatengesi - China Kupisa Yekuchinjisa Label Fekitori
Engraving firimu imhando yezvinhu inodimbura chinyorwa chinodiwa kana pateni nekuveza zvimwe zvigadzirwa, uye kupisa chengetedza izvo zvakavezwa zvemukati kune jira. Ichi chinhu chinoumbwa nharaunda zvine hushamwari zvinhu, hupamhi uye ruvara zvinogona kugadzirwa. Vashandisi vanogona kushandisa chinhu ichi kugadzira pr ...
TPU inopisa yakanyunguduka maitiro ekushongedza jira
Yekushongedza firimu inonzi zvakare yakakwira uye yakadzika tembiricha firimu nekuda kwayo yakapusa, yakapfava, yakasununguka, -tatu-hukuru (ukobvu), iri nyore kushandisa uye mamwe maitiro, inoshandiswa zvakanyanya mumachira akasiyana-siyana emachira seshangu, zvipfeko, mukwende, nezvimwe. Ndiyo sarudzo yemafashoni yezororo uye spo ...
Chinodhindwa firimu mhando nyowani yezvakatipoteredza zvine hushamwari zvipfeko zvekudhinda zvinhu, izvo zvinoona kupisa kwekutenderera kwemapatani kuburikidza nekudhinda uye kupisa kupisa. Iyi nzira inotsiva tsika yechinyakare kudhinda, haisi nyore chete uye yakapusa kushanda, asi zvakare isiri-chepfu uye isinganetsi ....